Maitiro Echokwadi Ekufunga Kunze Kwebhokisi: 10 Hapana Bullsh * t Matipi! - Pfungwa
Maitiro Ekufunga Kunze Kwebhokisi: 10 Hapana Bullsh * t Zvekugadzira Matipi!
Wakamboudzwa kufunga kunze kwebhokisi?
Chinhu chakajairika chakajairika kukurudzira vanhu kuti vagadzire uye vanovaka vasingaenderane.
Pfungwa ndeyekutyora chinzvimbo kuti uwane mhinduro nyowani kana kugadzira chimwe chinhu chinomira kubva muboka revanhu.
Icho chingave chiri chikumbiro chaunonzwa kubva kuna shefu kubasa, chirevo iwe chaunozviudza iwe paunenge uchiedza kugadzira hunyanzvi, kana kungoita general mazano ekuvandudza hupenyu hwako
Chero chingave chiri, chero kwainobva - kugona kwakafanana nemuti. Muti unoda ivhu rakaorera, kutarisirwa, uye kudya kuti ubatsire kukura uye kukura.
Kugadzira kwemunhu kunoda mhando yemamiriro ekunze uye nekuchengetedza kuitira kuti igone kukura uye kubudirira zvakare.
Kunyangwe paine dzimwe nzira dzekukurumidza dzekugadzira mazano, kufunga kunze kwebhokisi itsika yatinokudziridza kwenguva yakati rebei.
Heano gumi matipi ekukubatsira iwe kuwedzera yako yekufunga kufunga.
1. Bvunza mumwe munhu asina kujairana nedambudziko kuti vafunge.
Chikamu chakakura chechinetso nekufunga kunze kwebhokisi iro bhokisi pacharo.
Tinomuka sei mubhokisi?
Zvakanaka, zvinowanzoitika nekuti tinowira mupatani nechinhu chatiri kugara tichiita, nekuti ndizvo zvinodiwa kuti chinhu chiitwe.
Pane nzira dzakawanda chete dzaungatsvaire pasi, nyora zano rebhizinesi, kana kudhirowa mufananidzo.
Imwe nzira yekufambisa kunze-kwe-mubhokisi kufunga ndeyekubvunza mumwe munhu asina kujairana nechinhu icho maonero avo pazviri.
Iyo poindi haisi yekuwana mhinduro yakanangana nezve mamiriro acho ndeyekubatsira iwe kuona dambudziko kuburikidza neakasiyana seti yemaziso.
Vanogona kunge vasinganzwisise dambudziko, asi kuvateerera vachitaura nezvavanofunga pamusoro paro kunogona kukubatsira kufunga nezvezvinhu zvingave zvakakosha zvawakaregeredza.
Izvi zvinogona kunge zviri zvinhu zvausina kumbofunga nezvazvo kwenguva yakareba nekuti wakangojaira kufunga neimwe nzira.
2. Ongorora zvinopesana nemafungiro, maonero, uye zvitendero.
Kuchinja kwemaonero kunogona kukubatsira kuona mhinduro nekugadzira mazano akasiyana.
Imwe nzira yekuchinja maonero ako kutsvaga chinhu kubva kune rimwe divi rekupokana.
Unogona kunge uine zvikonzero zvakanaka zvekuita kana kutenda chinhu nenzira yauri, asi vamwe vanhu vanozove nezvikonzero zvekutenda kwavo kunopesana zvakare.
Izvo hazvisi zvinogara zvakanaka kana zvikonzero zvehungwaru, asi zvako zvinogona kunge zvisiri izvo. Zviri nyore kutsauswa neruzivo rwekunyepa nekuti chimwe chinhu chinonzwika zvakanaka uye chinogumburisa manzwiro edu, pane kubvunza chokwadi cheiyo ruzivo.
Iwe unogona zvakare kuona kuti izvo zvinopikisa zvitendero hazvina huchokwadi kwazviri, asi nekuzviongorora, unozvipa iwe mukana wekuona nyika neimwe nzira.
Kuchinja kufunga kwako kurovedza kwepfungwa dzako dzekugadzira. Iwe haugone kupedzisira wachinja maonero ako zvachose, asi iyo haisi iyo pfungwa.
Pane kudaro, iyo poindi iri kungoita iko kurovedzwa kuti iwe ugone kuzvigadzirira iwe kune yekufunga kufunga gare gare.
Izvo chaizvo hazvina kumbosiyana nekudzidzira uye kumhanya kuti ugadzirire marathon.
3. Zvibvunze kuti, 'Chii chandingaite zvakasiyana dai ndaifanira kutanga kubva pakutanga?'
Chinhu chikuru nezvekuva neruzivo nedambudziko ndechekuti unotova neruzivo rwekushanda rwe izvo zvinoshanda nezvisingashande.
Imwe nzira yekukurudzira kufunga kwekufunga ndeye kudzokera kumashure pakutanga uye funga izvo iwe ungadai wakaita zvakasiyana kubva pakutanga.
Ndeipi misungo yaungadai wakadzivisa?
Ndeapi mabhenefiti aungadai iwe wakakurira nekukura?
Chii chingaitwe nemazvo?
Chii chawakatambisa nguva yakawandisa pasina bhenefiti chaiyo?
Ndeapi makomborero uye zvipingaidzo zvakabatsira kutsanangura rwendo rwako?
Edza kuronga kosi yako sekunge iwe wanga uchitanga kubva pakutanga uye uone kuti ndedzipi dzimwe pfungwa dzinobuda munzira.
Iwe unogona kutowana zvakakosha kuti utange purojekiti yako kubva pakutanga, kudzivirira zvikanganiso uye kushandisa izvo zvawakadzidza munzira.
4.Shandisa mazano ekugadzira pfungwa senge kuronga mepfungwa, kusununguka, uye kufunga.
Maitiro echizvarwa ekugadzira anosimudzira kugona nekumanikidza iwe kufunga kunze kwebhokisi.
ndinonzwa kunge ndakarasika kudaro
Aya matatu matekiniki - mepu yekufunga, kusununguka, uye kufunga - ese ane nzira dzakanangana nemaitiro ekuzviita nemazvo.
Kufunga mepu inotanga nepfungwa yepakati iwe unonyora pakati peji uye wotenderedza.
Kubva ipapo, iwe unozviisa kure nepfungwa yepakati uine chero akakodzera mazano anouya mupfungwa nezvazvo.
Kubva pane iwo mazano, iwe unobuda zvakare. Uye iwe unongoramba uchifunga mibvunzo yakasiyana uye mazano anouya.
Iwe unogona kushandisa mitsara, zvirevo, kana kunyangwe mazwi ega kuti uvake masangano.
Kusununguka kurasa kwepfungwa kwemashoko uye mazano pane peji.
Inokurudzirwa zvakanyanya kushandisa peni nepepa kusununguka, nekuti runyoro runobata zvikamu zvakasiyana zvehuropi pane kutaipa.
Chaizvoizvo, izvo zvaunoita iwe kuseta timer yechero huwandu hwenguva, wobva watanga kunyora nezve chidzidzo.
Pfungwa ndeyekunyora kwehurefu hwese hwenguva usina kumira, kugadzirisa, kana kuita chero chinhu kunze kwekunyora izvo zvaunoziva nezvenyaya yacho. Maminitsi mashanu inzvimbo yakanaka yekutanga.
Kufungisisa pfungwa yakafanana nekusununguka, asi pasina iyo timer.
Iwe gara pasi nedambudziko rako uye wotanga kunyora chero chero mazano aunowana kwauri.
Chiito chekutora iwo mazano kubva mundangariro dzako chinobatsira nekugadzira nekuti pfungwa dzako hadzisisiri kutarisisa pane iyoyo pfungwa.
Kana yangobuda muuropi hwako, iwe unogona kujekesa pfungwa dzako kurega dzimwe pfungwa dziuye kwauri.
Iyo Yekupedzisira Gwara kune Akakomba Kufunga
Iwo 9 Mhando dzeUngwaru Uye Maitiro Ekuwedzera Ako
Kuruboshwe Brain Vs Kurudyi Ubongo: Kuzivisa Izvo Chokwadi Uye Kuvhiringidza Ngano
Iwe Uri A 'Kuona' Kana Iyo 'Intuitive' Hunhu Type?
5. Isa dambudziko padivi, buda, uye uwane kurovedza muviri.
Munhu anogara achigara padambudziko anogona kupedzisira adzikisira maonero avo pariri.
Kufungisisa pamusoro pechinetso hakuwanzo kuita nzira yakanaka yekutsvaga yekunze-iyo-bhokisi mhinduro. Gadza dambudziko padivi kwechinguva, simuka, uye shingairira.
Sekuvandudzwa kwenguva refu, zvidzidzo zvakawanda vakaratidza kuti kurovedza muviri kunobatsira kuvandudza kufunga kwekusimbisa nekusimudzira kushanda kune hutano muuropi.
Munguva pfupi, kuzorora kubva kuyedza kufunga kunze kwebhokisi uye kutarisa pane chimwe chinhu kwechinguva kunogona kubatsira kugadzirisa maonero ako.
Zvakaoma kuwana mhinduro kuchinetso chakaoma kana iwe uchinge wakatsamwa kana kunetseka nazvo.
Ipa dambudziko nguva yekuzorora, rega pfungwa dzako dzisetse, uye dzokera kwazviri.
6. Kugara uchibvunza 'Sei?'
Kufunga kwekufunga kune zvese nezve kuongorora.
Uchiri kubvunza uye kupindura mubvunzo 'Nei?' ichavaka ruzivo rwako uye kushanduka kwekufunga.
Iwe uchawana nzira nyowani dzakasiyana dzekunzvera nekutsvakisisa kuti nei, nekuti uchafukura zvinhu zvawaisaziva kare.
Kubvunza 'Sei?' zvakare inokuchengetedza iwe kuti urege kuwira munzira imwechete uye maitiro.
Nei ndiri kuita izvi?
Sei tiri kuita izvi nenzira iyi?
Sei ndisingakwanise kuita izvi neimwe nzira?
Nei nzira iyi yakasarudzwa?
7. Kanganisa maitiro ako enguva dzose uye chinja nharaunda yako.
Zviri nyore kuwira mumaitiro akajairika ehunhu uye kufunga, kunyanya kana chiitiko ichi chiri chinhu chaunogara uchiita.
Kana iwe uri kubasa, saka ungangove uchange uchibata zvimwe zvakafanana nyaya muchimiro chakadzokororwa, mazuva mazhinji pasvondo.
Iri basa rinongowanzoitika uye pfungwa dzako dzinozojairana neyakajairika.
Kana kuti pamwe iwe uri mugadziri ane hunyanzvi mune imwe nzira yekupenda. Kuramba uchipenda munzira iyoyo kuchakubatsira kunatsiridza nekuvaka hunyanzvi hwako mukati mechirango, asi kutora nguva yekugadzira mune dzimwe dzidzo kunogona kubatsira kuburitsa mazano matsva nekungoita zvakasiyana.
Kuvhiringidza maitiro ako kunopa pfungwa dzako mukana wekutsvaga mhinduro kubva kunedzimwe nzira.
Shanduko munharaunda inogona kupa bhenefiti yakafanana. Panzvimbo pekugara wakavharirwa muhofisi, kufamba nekukurumidza muchisikigo kunogona kukupa iwe mukana wekubvisa pfungwa dzako nekuwana kumwe kurudziro.
8. Tora nguva yekufungidzira uye rega pfungwa dzako dzidzungaire.
Kufungidzira chiri chiitiko chatisingakwanise kuwana.
Dzimwe nguva zvakanaka kungogara pasi uye rega pfungwa dzako dzidzungaire kwese kwadzinoda kuenda pane kuyedza kuti irambe ichisundirwa mubhokisi diki.
Vanhu zvisikwa zvekusika, kunyangwe muminda uye nhunha dzinogona kunge dzisingaratidzike sekugadzira pamusoro.
Kufungidzira kunobatsira kusimudzira kugona nekuti inokurudzira chiitiko munzvimbo dzepfungwa dzinotungamira mukugadzira.
Rega pfungwa dzako dzidzungaire nguva nenguva uye iwe unogona kuwana mazano awanga usati wambofunga.
Bvisa kusagadzikana uye uti 'Hongu!' kazhinji.
Negativity is anchor inoremedza mweya wekugadzira.
Kuzviudza iwe zvaunogona uye zvausingakwanise kuita inzira yechokwadi yekuzvimanikidza kupinda mubhokisi diki rausingori iwe, zvisinei nemhando yemunhu wauri kuve.
Kune vanopfuura vatsoropodzi vakakwana munyika vakagadzirira kukuudza izvo zvausingafanire kuita. Shingirira kuti usazove wega kwauri, kuti hongu kune ako mazano kazhinji, uye uzviongorore zvakakwana.
Ita tsika yako kuti hungu kune ako ekugadzira mazano uye zviitiko kazhinji.
Ita izvo zvinhu zvaungave usingaite zvakanaka, asi iwe une hanya nazvo zvakadaro.
kupedza nyaya sei iwe uchidanana
Zvekare, izvi zvinodzokera mukurera zvikamu zvepfungwa izvo zvine basa rekugadzira uye kunze-kwebhokisi kufunga. Nyowani nyaradzo uye nharaunda zvinogona kuvhura yakawanda mikova yemweya wekugadzira.
10. Batanidzwa nemamwe mapoka ekusika evanhu.
Vamwe vanhu vekugadzira vanogona kuve vakanakisa kunobva kurudziro uye kunze-kwebhokisi kufunga.
Ita shuwa kuti iwe unofunga kuti kana kwete iro boka riri kunyatso kubatsira kana kwete. Nzvimbo dzekugadzira, senge chero boka revanhu, dzinogona kurohwa kana kupotsa pakuva nzvimbo yakanaka yekukura nekusimbisa.
Kutsvaga rakasimba boka revanhu vakasika kunokupa iwe bhodhi rinonzwika kuti ubvise pfungwa dzako kubva pairi, ruzivo rwakawedzerwa uye huchenjeri kune yangu kune mazano, uye nesarudzo yekushandira pamwe iyo inogona kukudzidzisa zvakanyanya.
Haisi yese yekugadzira yatinayo kana dambudziko ratakatarisana naro rinoda kugadziriswa rega.
zvekuita kana mukomana achinyepa
maitiro ekuziva kana uine shamwari dzenhema
kuzivisa mumwe munhu manzwiro aunoita
ndinoda kufara zvakare
mibvunzo nezve nyika inoita kuti iwe ufunge
unogona here kuvimba mumwe munhu zvakare